Home » Arts & Humanities » နားစွန်နားဖျား ရပ်ကွက်…။ (March’ 2015)
လူတွေကလည်း မပေါ့်တပေါ် ဖီလင်ကိုပဲ ကြည့်ချင်ကြတာ…၊ အရမ်းပြတာကိုလည်း
လူပိန်းတွေကတော့ ၀ိုင်းဆုရလို့ ပါးစပ်ပိတ်သွားတယ်လို့ တွေးကြမှာပေါ့။
ပွဲပြီးသွားမှ ထပြီးကန့်ကွက်တဲ့အလုပ် မလုပ်နဲ့။
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အဆင့်အတန်းသည် အခု ရိုက်နေကြတဲ့ ရိုက်ကူးရေးပုံစံအတိုင်း
လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ အဆင့်အတန်းအတိုင်း
အဲဒီပွဲမှာ အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲ ငါတို့ နွှဲရမည် ဆိုတဲ့ ကိုငှက် ရေးတဲ့ သီချင်းကို
ကွမ်​ဒုံ ရက်​​လေးဆယ်​ က မုံရွာက သတင်း​ထောက်​ ဖမ်းသွားပါ​ရောလား ။ ကြည့်​​ပြော ။ သူ့ကိုဖမ်းထားတဲ့ အချိန်​ ဖွဘုတ်​အ​ကောင့်​ ပွင့်​ အွန်​လိုင်းဖြစ်​​နေပြီး စ​တေးတပ်​ ​တွေတက်​​နေလို့ ဆဲ သံ​တွေ အဲ့ညက မိုးမွန်​​နေတာပဲ ။ ​နောက်​​နေ့ ပြန်​လွတ်​လာတယ်​​ပြောတာပဲ ။
@ naywoonni ;
တိန် … “သီရိဂျေမောင်မောင် တစ်ယောက် CB Bank မှာ…” …
အဲဒီ အဆိုဒေါ်မဂျီးဆို အနော့် အမ်တီအရွယ်လောက်ရှိမဲ.. သူ့တူမ လိုခြင်လိုက်ထှာ..
မေမြတ်နိူးလေးက အစ္စဏီနဲ့ ?
သားစိုးက သီးချင်းမဆိုတော့ဘူး..စီးပွါးရေးပဲ လုပ်တော့မယ်ပြောထားပြီး..
ကျနော်ကတော့ ..ဖွေးဖွေးမှ မရရင်…ဒေါ်ဖွားမေနဲ့ တူတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို စိတ်ကူးမှာဗျ…
ဖြူဖြူ ဒီ လောက်ပိန်အောင် ဘိုလုပ်လိုက်လဲ မသိ??
ဒါဒါလေးက စိုးသူနဲ့ဘာပုလိုက်ပီဆိုလား မှန်သလားကျောင်းဒဂါဂျီးရေ။ ဖြူဖြူကျောင်သိမ်းက ဒီအခွေနားမထောင်မိရင်အသေဖြောင့်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခွေများလား ဖျားဖျား
ဖြူဖြူလေး ပြောတာကို ယုံလိုက်စမ်းဘာာာာဆို…
ကာယကံရှင်တွေက တရားဝင် ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်.. ဒါဒါဆီမှာလည်း.. အင်တာဗျူုးမေးခွန်းလေးတွေက.. ဒီအတိုင်းပါသွားလေရဲ့..။
ဒါဒါတို့ သတင်း​တော့ စိတ်​ဝင်​စားပါသည်​။ ဘာ​တွေများ ဖြစ်​​နေပါလိမ့်​။ သဂျီး စကားသံ ဖမ်းရတာ ဟုတ်​​လောက်​တယ်​။
နားစွန်​နားဖျား​တွေကို အမြဲ အား​ပေးပါတယ်​။ ဂျာနယ်​၀ယ်​စရာမလိုလို့။
ဖြူဖြုသီချင်းက ဒီတခါ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လား
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်ပြောလို့ ဆိုလို့ရတာမဟုတ်ပဲ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဘောင်ထဲက တပါးသူထိခိုက်အောင် ပြောလို့ မရဘူး ဆိုတော တဖြည်းဖြည်းတော့ သဘောပေါက်လာကြတယ် ထင်တာပဲ ( အထင် )
.နားစွန်နားဖျားဂျီးပြောပြတော့လည်း အနုပညာ ဇတ်စုံသိရသပေါ့
.ကျုပ်လည်း ဘိရုမာဇတ်ကားတွေ ကျိမရဘု
၀တ်မှုန်ချွေရွီ ရင့်ကျက်သွားအောင် လုပ်ပေးတဲ့လူတွေထဲ
ကျော်လည်း ပါတယ်လို့.. အဲ့လာလေး.. ကြော်ငြာလာထိုးတာပါ။ အဘတို့…
@ ကိုရင်စည်သူ ;
.ကိုင်​ဇာကို ဒါထက်​ ၂ နှစ်​ငယ်​မယ်​လို့ ထင်​ထားတာဗျ…
အရမ်းအမြင်ကတ်ပြီးမှ အရမ်းကြိုက်သွားတဲ့ အဆိုတော်တွေထဲမယ်.. နီနီခင်ဇော်က ထိပ်ဆုံးကပဲ…
ဂယ်ဘဲ ဂယ်ဘဲ ကို MMA ဆုပေးပွဲမှာ နားထောင်လိုက်ရတယ်… သူ့ပုံနဲ့ ဆိုဟန်နဲ့ သီချင်းနဲ့ကတော့ လိုက်ပါ့… သူ့ performance ကိုကြည့်ရင် ရင်တုန်ပန်းတုန်ရှိတာလေး တစ်ခုပါပဲ
@ လုံမလေး မွန်မွန် ;
ဟိုတစ်​ရက်​က မန်း​လေးရှိုးပွဲ မှာ မွန်း​အောင်​က ၃၅ ပုဒ်​​တောင်​ ဆက်​တိုက်​ဆိုသွားတယ်​ဆိုပဲ ။
သများ ပြောချင်တဲ့ အချက်ကို ဘဖော ပြောသွားပြီမို့ မပြောတော့ဘူးးး
ခင်ဝင့်ဝါ သဒင်းလေးလဲ လုပ်ပါဦး.. ညှီလေကောင်းလေ
မွန်းအောင်က ရန်ကုန်မှာ မတ်လ ၁၀ ရက်နေ့ည ဆိုမယ်။
မနေ့ညကတင်.. မြန်မာပြည်ကလာတဲ့.. ဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့.. လေကန်ဝေဖန်ရေးစကားပြောဖြစ်တာမှာ…
@ apolo 11 ;
စဂါးမစပ်​ ဂျာဂျာထက်​ ဆိုတာ ဒူတုန်းဟင်​င်​
@ hmee ;
အူးဘက်ထုံးစံအတိုင်း…သတင်းတွေက စုံပလုံတုံနေရော… ဂျာနယ်ဖိုးမတတ်နိုင်သူမို့… ကျေးဇူးပါ.. :))
ဇာလျန်းဆိုတာ။ရေးတာတွေ..မကြားဖူးသလိုပဲ.. အခုတလော တေးရေး ဆရာညီညီသွင်သီချင်းလေးတွေ… တော်တော်လေး သဘောကျနေတယ်.. :))
နားစွန်​နားဖျား ပဲ ​ကောင်းတယ်​
​ရုပ်​ရှင်​နဲ့ ဂီတ အ​ကြောင်း​တွေ မ​တွေးအား​သေးပါဗျာ
@ စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်ဘရယ် ယောက်ျား ;